IRosenhaus (ekhohlo) kwinqaba efuthiweyo yaseLiepen - I-Airbnb
IRosenhaus (ekhohlo) kwinqaba efuthiweyo yaseLiepen
Gielow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguVerena
I-Rosenhaus ibekwe kwisiqithi esihle senqaba yenqaba yaseLiepen enokufikelela ngokuthe ngqo kwi-moat ebanzi. Ibuyiselwe ngothando kwaye yahlaziywa ngo-2017, ulindelwe yindlu enencasa entle, ecela iintsapho, abahlobo okanye izibini ukuba ziphumle kwaye ziphumle ngokuzola ngokupheleleyo.
Xa imozulu intle, kungcono ukuba uhlale ngaphandle kwaye wonwabele uxolo noxolo ngasechibini okanye ngorhatya kwindawo yokosa inyama, kwimeko yemozulu embi unokuzenza ukhululeke phambi kweziko elivuthayo.
I-Wasserburg Liepen kunye nendlu yayo yerozi, erhangqwe yi-moat kunye nepaki yethu encinci, ifakwe kakuhle kwi-Mecklenburgische Seenplatte. Kule lali kukho ichibi lokuhlambela kumgama wokuhamba, izinto ezinje ngeCastle Basedow, iKummerow Castle okanye inqaba yase-Ivenack ene-oki eneminyaka eli-1,000 XNUMX ubudala kumgama webhayisekile. Iziko lenkcubeko ye-Festspiele Mecklenburg Vorpommern yimizuzu nje embalwa ukusuka.
Sikwahlala nabantwana kunye nezinja kwisiqithi inqaba, ukuze sihlale sifumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gielow